25 Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan Dibadda 2022
25 Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Nigerian inay wax ku bartaan Dibadda
Boostadani waxay ku saabsan tahay deeqaha waxbarasho ee ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan dibadda, sidaa darteed haddii aad xiisaynayso inaad ku sii wadato shahaadada dibadda oo aadan haysan awood dhaqaale, qodobkan ayaa kaa caawin kara. Iyada oo deeqda waxbarasho, waxaad awoodi kartaa inaad wax ku barato jaamacad caalami ah oo aad dooratay.
Nigeria waa wadan soo koraya walina waddo dheer ayaa u harsan marka laga hadlayo horumarka sida wadamada kale ee horumaray sida Shiinaha iyo USA. Si loo xoojiyo dalka loona dhaqaajiyo dhaqaalaheeda waxyaabo badan oo wali waa in la barto taas oo dalku uusan siin karin ardaydeeda iyada oo loo marayo hay'adaha sare.
Marka, dadka reer Nigeria waxay aadayaan dibedda inay waxbartaan, helaan xirfado iyo aqoon ku filan oo tayo leh, kuna soo celiyaan dalka si loo hirgeliyo.
Maaddaama ay tahay waddan soo koraya, waxaa ka maqan dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin machadyadeeda maadaama aysan jirin ilo ku filan ama sheybaarro si fiican u qalabaysan iyo tas-hiilaadyo kale oo fududeynaya waxbarashada ardayda.
Wadamada sida Kanada, Mareykanka, Shiinaha, Boqortooyada Midowday, iyo waddamada kale ee horumaray waxay cusbooneysiiyeen tas-hiilaadka xarumaha ay ka shaqeeyaan iyagoo ka dhigaya meesha ugu sareysa xarunta waxbarasho ee adduunka.
1 25 Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Nigerian inay wax ku bartaan Dibadda
1.1 5 Deeqaha Kanada ee loogu talagalay Ardayda Nigerian
1.1.1 Deeqda Waxbarashada ee Vanier Canada
1.1.2 Deeqaha Aasaasiga ah ee Trudeau
1.1.3 Jaamacadda Calgary Deeqda Galitaanka Caalamiga ah
1.1.4 Haweenka ku jira Barnaamijka Deeqda-waxbarasho ee STEM
1.1.5 Abaalmarinta Deeqaha Caalamiga ah ee Jaamacadda York
1.2 5 UK Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Nigerian
1.2.1 Jaamacadda Dundee Deeqaha Ardayda Nigerian
1.2.2 Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee Afrika ee Jaamacadda Cambridge
1.2.3 Robert Gordon University Shahaadada Jaamacadeed ee Shahaadada Jaamacadeed
1.2.4 Jaamacadda Birmingham Nigeria deeq waxbarasho oo heer sare ah
1.2.5 Deeqaha Loughborough Development Trust ee Afrika
1.3 5 Deeqaha waxbarasho ee Mareykanka ee loogu talagalay Ardayda Nigerian
1.3.1 Barnaamijka Aqoonyahanada Aasaaska Mastercard ee Jaamacadda California
1.3.2 Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Mareykanka ee Ardayda Caalamiga ah
1.3.3 AAUW International Fellowship ee Haweenka
1.3.4 Margaret McNamara Deeq Waxbarasho
1.3.5 Barnaamijka Ardayda Dibadda ee Fullbright
1.4 5 Deeqaha Yurub ee loogu talagalay Ardayda Nigerian
1.4.1 Barnaamijka Aqoonta Liinta, Nederland
1.4.2 Machadka Machadka Iswidhishka ee Deeqaha Caalamiga ah (SISGP)
1.4.3 Stipendium Hungaricum Deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgaliyo
1.4.4 Deeqda UHR - Jaamacadda Difaaca Iswidhishka
1.4.5 Ecole Normale Superieure Deeqda Xulista Caalamiga ah
1.5 5 Deeqaha Shiinaha ee loogu talagalay Ardayda Nigerian inay wax ku bartaan Dibadda
1.5.1 Deeqda Dawladda Shanghai
1.5.2 Deeqaha Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadda Tsinghua
1.5.3 Jaamacadda Jiaxing Deeqaha Caalamiga ah
1.5.4 Deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Peking (PKUS)
1.5.5 Deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Zhejiang ee Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadeed
1.6 Talo soo jeedin
Guud ahaan, barashada dibedda waa khibrad layaableh qof walba dhibaatada kaliya ee ugu weyn waa qiimaha. Wax ku barashada dibada waa mid aad qaali u ah inkasta oo dad badani ay rabaan inay ku raaxeystaan ​​khibrada aysan u awoodin qarashka.
Arrin kale oo ku saabsan barashada dibadda waa caqabadda luqadda, laakiin taasi si fudud ayaa lagu xallin karaa iyadoo si fudud looga codsado jaamacad dal ku hadla Ingiriis ama Faransiis. Dadka reer Nigeria, waxay u noqon doontaa dalal ku hadla Ingriisiga taasna ma maqna, waxaa jira Boqortooyada Ingiriiska, qaybo ka mid ah Kanada, USA, iwm
Haa, dibedda wax lagu barto aad ayey qaali u tahay laakiin waxaa jira xal loo helo taas, deeqo waxbarasho; taasi waa xalka.
Wadamada horumaray waxay albaabadooda u furaan ardayda meel kasta oo dunida ka mid ah inay u yimaadaan si ay ugu amraan waxbarashadeeda heer caalami ah ee machadyadooda caanka ah mana aha oo kaliya inay "albaabada u furayaan" wadamadan inay bixiyaan fursado deeq waxbarasho oo deeqsinimo leh ardayda si ay runti waxay ku raaxaystaan ​​waayo-aragnimo waxbarasho oo buuxda ee hay'adahooda kala duwan.
Deeqdan waxbarasho guud ahaan waxaa loogu yeeraa "deeqaha waxbarasho ee caalamiga ah" waxayna badanaa heli karaan ardayda dhammaan barnaamijyada iyo heerarka waxbarasho.
Sida Nigerian ahaan, ku guuleysiga deeqda waxbarasho ee caalamiga ah waxay la timid faa iidooyin aan dhammaad lahayn oo qaarkood ay yihiin;
Waxaad sahamin iyo khibrad u yeelan kartaa qaybaha kale ee adduunka.
Waxaad u isticmaali kartaa fursadda inaad ku barato luqad cusub, dhaqan cusub.
Waxaad helaysaa xiriiro caalami ah oo aad yeelatay saaxiibo cusub
Waxaad ka heli doontaa inaad ku raaxeysato waxbarashada heer caalami ah ee hay'adaha sare ee sharafta leh
Fursado shaqo oo waaweyn iyo horumarin shaqsiyadeed
Waxaad kaheli doontaa khibrada guud.
Sababahu waa kuwo aan dhamaad lahayn, markay arkeen sida nidaamka waxbarasho ee Nigeria uu cilladaysan yahay, iyo inaad waxbarasho u doonato waddan sida Kanada ama Boqortooyada Midowday waa fursad weyn.
Si kastaba ha noqotee, Nigeria waa dalka ugu weyn Afrika, dhul ahaan iyo dhaqaale ahaanba, sidoo kale wuxuu xiriir la leeyahay inta badan dalalka Yurub iyo Aasiya. Sababtaas iyo sababo kale oo badan awgood, wadamadan waxay doorbidaan inay deeqo waxbarasho siiyaan ardayda reer Nigeria in kabadan ardayda ka timid wadamada kale.
Si aan ugu soo dhoweyno fursadahaan deeqda waxbarasho ardayda u dhalatay Nigeria waxaan ku baranaynaa Dibadda Dibadda Qaramada Midoobay macluumaad ku saabsan deeqaha waxbarasho ee UK, Kanada, Mareykanka, Yurub, iyo Shiinaha.
Mid kasta oo ka mid ah waddamadan ayaa sannad walba siiya deeqo waxbarasho ardayda reer Nigeria si ay wax ugu bartaan dibadda oo ay u helaan xirfado heer caalami ah iyo aqoon ay ugu adeegsan karaan inay dalkooda hore ugu maraan.
Waxaad had iyo jeer hamisay inaad wax ku barato dibadda, riyadaadu wali way rumoobi kartaa. Ku dhex milmaan fursadahaas waxbarasho oo aad ku xaqiijiso riyadaada ah inaad kasbato shahaado caalami ah.
Kuwa soo socda ayaa ah deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan dibadda, waxaad aadi kartaa meel kasta oo kugu habboon.
Deeqaha Aasaasiga ah ee Trudeau
Jaamacadda Calgary Deeqda Galitaanka Caalamiga ah
Haweenka ku jira Barnaamijka Deeqda-waxbarasho ee STEM
Abaalmarinta Deeqaha Caalamiga ah ee Jaamacadda York
Jaamacadda Dundee Deeqaha Ardayda Nigerian
Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee Afrika ee Jaamacadda Cambridge
Robert Gordon University Shahaadada Jaamacadeed ee Shahaadada Jaamacadeed
Jaamacadda Birmingham Nigeria deeq waxbarasho oo heer sare ah
Deeqaha Loughborough Development Trust ee Afrika
Barnaamijka Aqoonyahanada Aasaaska Mastercard ee Jaamacadda California
Abaalmarinta deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Mareykanka ee Ardayda Caalamiga ah
AAUW International Fellowship ee Haweenka
Margaret McNamara Deeq Waxbarasho
Barnaamijka Ardayda Dibadda ee Fullbright
Barnaamijka Aqoonta Liinta, Nederland
Machadka Machadka Iswidhishka ee Deeqaha Caalamiga ah (SISGP)
Stipendium Hungaricum Deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgaliyo
Deeqda UHR - Jaamacadda Difaaca Iswidhishka
Ecole Normale Superieure Deeqda Xulista Caalamiga ah
Deeqda Dawladda Shanghai
Deeqaha Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadda Tsinghua
Jaamacadda Jiaxing Deeqaha Caalamiga ah
Deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Peking (PKUS)
Deeqda waxbarasho ee Jaamacadda Zhejiang ee Ardayda Caalamiga ah ee Jaamacadeed
5 Deeqaha Kanada ee loogu talagalay Ardayda Nigerian
Kanada waa mid ka mid ah meelaha ugu sareeya ee waxbarasho adduunka oo dhan iyada oo leh hay'ado caan ah oo bixiya waxbarasho heer caalami ah.
Hay'adaha Canadian-ka waxaa caalami ahaan loo aqoonsan yahay inay siiyaan waxbarasho tayo leh ardayda gudaha iyo dibaddaba. Kumaan kun oo arday caalami ah ayaa u qulqulaya Kanada sanad walba si ay u sii wataan barnaamijka shahaadada ee ay doortaan.
Guddiga waxbarashada Kanada waxay u aqoonsan yihiin ardayda caalamiga ah sidoo kale ardaydooda maxalliga ah waxayna siiyaan fursado waxbarasho. In kasta oo muwaadiniinta iyo deganayaasha joogtada ah ee Kanada ay ku raaxaystaan ​​fursado badan oo waxbarasho ardayda caalamiga ah haddana si kastaba ha ahaatee waa la siiyaa.
Ardayda reer Nigeria waxay sidoo kale dalban karaan fursadahaan waxbarasho ee caalamiga ah ee Kanada.
The Deeqda Waxbarashada ee Vanier Canada waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ardayda reer Nayjeeriya ay wax ugu bartaan dibadda oo lagu qiimeeyo $ 50,000 sanadkiiba muddo saddex sano ah oo ah barashada qalin jabinta.
Deeqda waxbarasho ayaa loo heli karaa oo keliya ardayda ka qalin jabisa dhinacyada caafimaadka, cilmiga dabiiciga iyo / ama injineernimada, iyo cilmi baarista bulshada iyo aadanaha.
Ku guuleystayaasha waxaa lagu doortaa iyadoo lagu saleynayo heer sare oo tacliimeed, karti cilmi baaris, iyo xirfado hoggaamineed maadaama deeqda waxbarasho si gaar ah loogu talagalay in lagu soo jiito ardayda qalin jabisay ee aqoonta sare leh. Vanier CGS wuxuu kuu ogolaanayaa inaad wax ka barato mid ka mid ah meelaha cilmi baarista ee kor ku xusan hay'ad kasta oo Canadian ah.
Si buuxda loogu yaqaan Pierre Elliot Trudeau Deeq waxbarasho, waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ardayda reer Nigeria ay ku bartaan dibedda machad kasta oo Canadian ah oo ay doortaan.
Hay'adda 'Trudeau foundation' waxay bixisaa deeqda waxbarasho, waxaana loo abuuray in lagu tababaro laguna qalabeeyo murashaxiinta takhasuska sare leh qalab sax ah iyo aqoon ay ku wadaagaan oo ay ku dabaqaan daraasaddooda oo ay ku noqdaan hoggaamiyeyaal hal abuur leh oo ka tirsan hay'adahooda iyo bulshada.
Deeqdani waxay u dhigantaa wadar ahaan $ 60,000 sanadkiiba muddo seddex sano ah oo ah daraasad dhakhtar waxayna daboolaysaa khidmadaha waxbarashada, qiimaha nolosha, cilmi baarista, iyo gunnooyinka safarka. Deeqda ayaa la bixiyaa sanadkiiba, markaa haddii aad seegto sannadkan, marwalba waad dalban kartaa sanadka soo socda.
Jaamacadda Calgary waxay bixisaa deeqaha waxbarasho ee gelitaanka caalamiga ah ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan dibadda. Deeqdan ayaa la siiyaa sanad walba ardayda dhigata shahaadada koowaad ee Nigerian ee soo galaya jaamacadda markii ugu horreysay isla markaana leh waxqabad tacliimeed oo xoog leh dugsigooda sare.
Waa deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo oo lagu qiimeeyay $ 15,000 oo dib loo cusbooneysiin karo saddex sano oo dheeri ah oo daraasad jaamacadeed ah.
Si aad ugu qalanto deeqdan waxbarasho waa inaad ku aflaxdaa shuruudaha aqoonta luuqadda Ingiriisiga ee ay dejisay Jaamacadda Calgary waana inaad ku codsatay barnaamijka shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad ee isla machadka.
STEM waxay u taagan tahay Sayniska, Teknolojiyada, Injineerinka, iyo Xisaabta.
The Haweenka ku jira deeqda waxbarasho ee STEM waxaa kaliya loogu talagalay haweenka reer Nigeria ee doonaya inay wax ku bartaan Kanada waxayna ku jiraan meel kasta oo ka mid ah aagga STEM ee daraasadda. Waxaa loo aasaasay in lagu xoojiyo haweenka ku jira STEM ee leh awood waxbarasho sare. Waxay wax ku baran karaan hay'ad kasta oo Canadian ah oo qayb ka ah ururka MPOWER.
Codsadayaasha deeqda waxbarasho waa inay ku aqbalaan barnaamijka shahaadada buuxda ee machad Canadian ah oo MPOWER ay taageerto oo ay haysato ogolaansho waxbarasho oo Canadian ah.
Abaalmarinta deeqda waxbarasho waa Abaalmarin Weyn oo ah $ 3,000 iyo Xusuus-sharaf sharaf leh oo ah $ 1,000, xusuusnow in deeqdani ay gaar u tahay haweenka Nigeria.
Jaamacadda York waxay leedahay in kabadan daraasado abaalmarin deeq waxbarasho ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah kuwaas oo sidoo kale loo heli karo ardayda reer Nigeria ee doonaya inay wax ku bartaan dibadda. Jaamacadda York waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya Kanada waxayna sidoo kale haysataa aqoonsi caalami ah.
Jaamacadu waxay siisaa deeqdan waxbarasho ee ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan dibadda si bilaash ah waxayna ku amraan waxbarashadeeda tayada leh walaac la'aan.
The Abaalmarinta Deeqaha Caalamiga ah ee Jaamacadda York waxaa la siiyaa sanad walba ardayda reer Nigeria ee soo galaya jaamacada markii ugu horeysay ee barnaamijka shahaadada koowaad.
Inkasta oo qaar ka mid ah deeqaha waxbarasho qayb ahaan la maalgeliyo kuwa kale ayaa si buuxda loo maalgeliyaa, waa inaad u tagtaa kuwa si buuxda loo maalgeliyo maadaama ay dib u cusbooneysiin karaan illaa dhammaadka barnaamijkaaga shahaadada koowaad.
5 UK Deeqo waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Nigerian
Boqortooyada Ingiriiska iyo Nayjeeriya waxay kuxiran yihiin siyaabo ka sareeya ganacsiga, iyagoo ah sayidkii gumeystaha kan dambe hadana wali kujira qodobo wanaagsan. Dadka reer Nigeria waxaa la siiyaa fursado deeq waxbarasho oo wanaagsan oo loogu talagalay ardayda doonaya inay ku sii wataan qalin-jabinta ama shahaadada koowaad ee jaamacadaha UK.
Barwaaqo sooranka, Erasmus Mundi, dowladda UK, iyo jaamacadaha ayaa ku howlan bixinta deeqaha waxbarasho ee ardayda reer Nigeria ay wax ugu baranayaan dibadda.
Anaga oo ah Daraasaadka Dibedda ee Dibadda waxaan bixinnay shan ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu sarreeya Boqortooyada Ingiriiska ee loogu talagalay ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan dibadda jaamacad ku taal UK iyada oo aan laga walwalin waxbarashada.
Jaamacadda Dundee waa hay'ad sare oo wax lagu barto oo ku taal Boqortooyada Midowday waxayna leedahay in ka badan ardayda 140 Nigerian ah ee ka diiwaangashan barnaamijyadeeda shahaadada koowaad, postgraduate, iyo qalin-jabinta.
The jaamacadu waxay leedahay in kabadan nus dersin deeq waxbarasho loogu talagalay ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan dibadda Ingiriiska si bilaash ah. Deeqaha ayaa loo heli karaa ardayda doonaya inay ku sii wataan barnaamijka tacliinta ee shahaadada koowaad, heerka koowaad, iyo heerarka qalin-jabinta ee daraasadda.
The Jaamacadda Cambridge waxay siisaa maalgelin dadka Afrikaanka ah inay wax ku bartaan garoonkan heerka sare ah ee wax lagu barto ardayda Nigeriana kama dhaafaan inay codsadaan. Deeqda waxbarasho iyo deeqaha kale ayaa loo heli karaa Nigerian shahaadada koowaad, shahaadada koowaad iyo codsadayaasha qalin jabiya.
Deeqdani waxay ka badan tahay daraasad hubin ah si loo maro shuruudahooda ka hor intaadan bilaabin codsiga.
Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ardayda reer Nigeria ay ku bartaan dibadda oo markan mid ka mid ah jaamacadaha caanka ah ee UK.
Ku-xigeenka Shahaadada Jaamacadeed ee Ku-xigeenka Jaamacadda Robert Gordon waxaa kaliya loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad ee caalamiga ah - Nigerian oo ay ku jiraan - oo doonaya inay ku sii wataan shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Deeqdani waxay daboolaysaa khidmadda sanad-dugsiyeedka buuxa ee ardayga iyo codsadayaashu waa inay maraan shuruudaha kahor intaadan dalban.
Fursaddan deeqdan waxbarasho waxaa loo soo bandhigay inay tahay mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ardayda reer Nigeria ay wax ugu bartaan dibadda iyo Jaamacadda UK ee Birmingham.
Deeqdan ayaa la siiyaa sanadkiiba 12 arday oo reer Nigeria ah, oo u dhiganta midkiiba 2,500 Euros, oo ka diiwaangashan barnaamijka koowaad ee shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Jaamacadda Birmingham Deeq waxbarasho oo heer sare ah oo Nigerian ah waxaa la siiyaa oo keliya sanadka ugu horeeya ee daraasad jaamacadeed oo waqti-buuxa ah iyo ardayda leh diiwaanno tacliimeed oo heer sare ah waxay u taagan yihiin fursado wanaagsan oo ay ku guuleystaan ​​abaalmarinta.
Deeqdan waxaa bixiya Jaamacadda Loughborough oo loogu talagalay Afrikaanka, taas oo ka dhigaysa ardayda reer Nigeria inay u qalmaan sidoo kale.
Deeqda waxbarasho ayaa loo heli karaa codsadayaasha jaamacadeed ee cusub ee ka diiwaangashan Jaamacadda Loughborough waxayna daboolayaan khidmadaha waxbarashada hal sano.
Codsadeyaasha muujiya guul gaar ahaaneed ee tacliimeed waxay fursad u leeyihiin inay ku guuleystaan ​​abaalmarinta deeqda waxbarasho, in kasta oo ay jiraan shuruudo badan oo aad u baahan tahay inaad ka feejignaato ka hor intaadan dalban.
5 Deeqaha waxbarasho ee Mareykanka ee loogu talagalay Ardayda Nigerian
Mareykanka waa mid ka mid ah meelaha ugu sareeya ee waxbarasho loo aado adduunka, maaddaama ay ku jiraan qaar ka mid ah jaamacadaha adduunka ugu sarreeya iyo hay'adaha kale ee tacliinta sare.
Waxaa jira deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan dibedda gaar ahaan jaamacadaha Mareykanka iyo kulliyadaha oo ay ku amraan waxbarashadeeda tayada leh iyo khibradda guud ee cajiibka ah.
Waxaan soo xulnay meesha ugu sareysa deeqaha waxbarasho ee Mareykanka ee ardayda reer Nigeria ee wax ku barta dibadda;
Miyaad had iyo jeer ku riyootay inaad wax ku barato barnaamijka shahaadada aad doorbideyso ee jaamacadda caanka ah ee California? Hagaag, waa kan wakhtigii riyadaasi rumoobi lahayd, oo markan waxaad wax ku baraneysaa barnaamijka deeqda waxbarasho ee ay maalgeliso Mastercard Foundation.
Deeqdani waxay labadaba u tahay ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo shahaadada mastarka ee Nigerian oo ay tahay inay codsadeen gelitaanka jaamacadda oo ay buuxiyeen shuruudaha deeqda waxbarasho.
Hay'adda Mastercard Foundation waxay caan ku tahay inay siiso fursado deeq waxbarasho ardayda ka socota dalalka Afrika tanina waa mid ka mid ah kuwa badan.
The Jaamacadda Mareykanka waxay siisaa laba deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda reer Nigeria in dibedda wax looga barto gaar ahaan jaamacaddan.
Deeqaha waxbarasho waa kuwo aad u tartamaya oo lagu abaalmariyo iyada oo lagu saleynayo mudnaanta, sidaas darteed haddii aad rabto inaad u-qalanto deeqaha waxbarasho waxaad u baahan tahay inaad lahaato tayo sare. Astaamahani waa waxqabad akadeemiyadeed oo gaar ah, xirfadaha isgaarsiinta ee Ingiriisiga, iskaa wax u qabso, iyo adeegga bulshada.
Deeqdani waxay u dhexeysaa $ 4,000 ilaa $ 20,000 sanad dugsiyeedkiiba waana la cusbooneysiin karaa saddex sano oo dheeri ah oo ah daraasadda koowaad.
Wadashaqeyntan waxaa loogu talagalay haweenka aan ka imaaneyn Mareykanka taas oo ka dhigaysa ardayda reer Nigeria inay xaq u yeeshaan inay codsadaan laakiin si adag loogu talagalay haweenka.
The Wadashaqeyn caalami ah AAUW waxaa la siiyaa haweenka si ay u raadsadaan daraasad waqti-buuxa ah ama cilmi-baaris gudaha Mareykanka ah.
Codsadeyaasha waxaa lagu xushaa heer aqooneed heer sare ah waxayna muujiyeen u heellan haweenka iyo gabdhaha.
Wadashaqeyntu waa mid lagu xalin karo hay'ad kasta oo ka sareysa Mareykanka oo bixisa cilmi baaris waqti-buuxa ah ama barnaamijyo waxbarasho ah.
Waxaa kaliya u heli kara ardayda ku jirta heerarka waxbarasho ee masters-ka, takhasuska iyo heerka labaadba waana u qalantaa $ 18,000, $ 20,000, iyo $ 30,000 siday u kala horreeyaan oo la cusboonaysiin karo sannadka labaad. Kahor intaadan dalban is weheshankan, codsadayaashu waa inay ka codsadeen machadyadooda waxbarasho ee ay soo jeediyeen.
Tani sidoo kale waa mid kale deeq waxbarasho oo loogu talagalay haweenka caalamiga ah, Dadka reer Nigeria ayaa lagu daray, si ay wax uga bartaan hay'ad aqoonsi oo Mareykan ama Canadian ah oo la aqoonsan yahay.
Codsadeyaashu waa inay ahaadaan ugu yaraan 25 sano waqtiga arjiga, ha ahaadaan haweeney iyo reer Nayjeeriyaan ah oo ka diiwaangashan barnaamij jaamacadeed oo waqti-buuxa ah hay'ad kasta oo sare oo wax ku barata Maraykanka ama Kanada.
Sannadle ah, ardayda reer Nigeria ayaa loogu yeeraa dalbo barnaamijka isdhaafsiga ardayda ajnabiga ah ee Fullbright in lagu amro deeqda waxbarasho oo u dhiganta kumanaan doolar ardaykiiba.
Abaalmarinta waxaa kaliya loogu talagalay ardayda reer Nigeria ee haysta dhakhaatiirta ama Ph.D. ardayda, kuwa kale uma qalmaan inay codsadaan. Ku guuleystayaasha waxaa lagu doortaa iyadoo lagu saleynayo waxqabadka tacliimeed ee xoogan, heer sare oo aqoon luqadda Ingiriisiga ah, soo jeedin cilmi baaris oo adag, iyo inbadan.
Deeqdani waxay daboolaysaa khidmadda duulimaadka, gunnooyinka dejinta, gunnada bil kasta, kaalmada guriyeynta, kaalmada kumbuyuutarka, iyo ugu dambeyn, buugaagta iyo gunnada sahayda.
Waxay sidoo kale daboolaysaa caymiska caafimaadka aasaasiga ah ee jaamacadda waana tartan aad u adag sidaas darteed hubso inaad buuxiso shuruudaha kahor intaadan dalban.
5 Deeqaha Yurub ee loogu talagalay Ardayda Nigerian
Ma dooneysaa inaad wax ka barato jaamacad Yurub ku taal iyadoo la adeegsanayo deeqo waxbarasho? Waxaa laga yaabaa inaan diyaarinay liis - oo ay weheliso faahfaahinta - ee ugu sarreysa 5 deeqda waxbarasho ee Yurub ee loogu talagalay ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan dibadda.
Barnaamijka Aqoonta Orange (OKP), waa mid ka mid ah Deeqaha waxbarasho ee Yurub ee Nigerian ardayda inaad dibadda wax ku barato si gaar ah jaamacad kasta oo Nederland ah.
Deeqdani waxay u furan tahay Tababbarka Gaaban iyo barnaamijyada heerka masters-ka ee dhammaan qaybaha daraasadaha ee hay'adaha sare ee Nederland.
Waa deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo oo ardayda danaynaysa ay tahay inay ka dalbadaan machadkooda ay doorbidaan oo ay buuxiyaan shuruudaha.
Tani waa deeq waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo oo loogu talagalay dadka reer Nigeria ee doonaya inay wax ku bartaan dibadda inay u yimaadaan inay ku sii wataan barnaamijka shahaadada mastarka ee jaamacadda Sweden. Deeqdani waxay ku xiran tahay oo keliya jaamacadaha soo socda;
Machadka Teknolojiyada ee Blekinge
Machadka Farsamada ee Royal
Jaamacadda farsamada ee Lulea
Dugsiga Dhaqaalaha ee Stockholm
Jaamacadda Gothenberg iyo
Kahor intaadan dalban Deeqda waxbarasho ee SISGP, waa inaad codsatay gelitaanka barnaamij kasta oo shahaadada mastarka ah midkastoo jaamacadaha kor ku xusan.
Deeqdani waa mid aad u tartan badan waxayna daboolaysaa khidmadaha waxbarashada iyo kharashyada nolosha muddo 2 sano ah oo daraasadda masters-ka ah.
Dowladda Hungary waa deeqsi si ay u bixiso deeqo waxbarasho oo caalami ah oo si buuxda loo maalgeliyo ee ardayda reer Nigeria ay xaq u leeyihiin inay codsadaan.
Deeqdani waxay ku faaftaa dhammaan qaybaha kala duwan, taas oo ah, shahaadada koowaad, shahaadada koowaad, masters-ka, iyo Ph.D. ardayda way dalban karaan. Waxay sidoo kale u socotaa inay daboosho dhammaan koorsooyinka iyo deeqda waxbarasho ayaa lagu xaddidi karaa jaamacad kasta oo Hangari ah.
Kahor intaadan dalban deeqdan waxbarasho, waa inaad codsatay oo lagaa aqbalay shahaadada koowaad ama shahaadada qalin-jabinta barnaamijka waqti-buuxa ee jaamacadda aad jeceshahay ee Hungary.
The Stipendium Hungaricum runtii waa deeq-waxbarasho deeq-lacageed oo dhammaystiran oo loogu talagalay ardayda Nigerian inay wax ku bartaan dibadda.
Deeqdani waxay daboolaysaa khidmadaha waxbarashada oo buuxa, lacag bille ah oo ku filan oo lagu daboolayo kharashyada nolosha, hoy buuxa, caymiska caafimaadka, iyo tikidhada duulimaadka.
Jaamacadda Difaaca Iswiidhan ayaa bixisa UHR deeq waxbarasho ardayda caalamiga ah marka laga reebo wadamada EU / EEA iyo Switzerland taas oo ka dhigaysa ardayda reer Nigeria inay u qalmaan.
Deeqdan ayaa loo heli karaa ardayda doonaya inay ku sii wataan barnaamijka shahaadada Bachelor ama Master ee Jaamacadda Difaaca Sweden.
Waa inaad codsatay shahaadada koowaad ee jaamacadeed ama barnaamijka heerka mastarka ee jaamacadda si aad uguqalanto deeqdan waxbarasho.
Deeqdani waxay kaliya dabooleysaa khidmadaha waxbarashada waxaana loogu talagalay ardayda leh waxqabadka tacliimeed ee wanaagsan.
Ardayda caalamiga ah ee ka socota waddan kasta waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan deeqdan waxbarasho taas oo ka dhigaysa ardayda reer Nigeria inay si isku mid ah ugu qalmaan.
Deeqdani, sida kuwa kale, waxay leedahay shuruudo u gaar ah sidoo kale oo ay ku jiraan in codsadayaashu ay ka hooseeyaan da'da 26 da'da. Waa inuu noqdaa arday cusub oo soo galaya Ecole Normale Superieure si loo sii wado barnaamijka heerka diblooma ee sayniska ee Farshaxanka iyo Aadanaha, Farshaxanka, iyo Bani-aadmiga.
5 Deeqaha Shiinaha ee loogu talagalay Ardayda Nigerian inay wax ku bartaan Dibadda
Waa kuwan deeqaha waxbarasho ee Shiinaha ee ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan dibadda;
Dawladda Shanghai waxay siisaa deeqo waxbarasho ardayda caalamiga ah ee aan ahayn muwaadiniinta Jamhuuriyadda Shiinaha taas oo ka dhigaysa Ardayda reer Nigeria ee u qalma inay codsadaan.
Deeqda waxbarasho waxaa loogu talagalay bachelor's, master's, iyo Ph.D. barnaamijyada oo daboolaya khidmadaha waxbarashada, hoyga, kaalmada nolosha, iyo caymiska dhameystiran.
Jaamacadda Tsinghua waxay leedahay deeqo taxane ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah sida deeqda waxbarasho ee Dowladda Shiinaha, Siemens China Scholarship, iyo deeqo waxbarasho oo kale oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah.
Ardayda dhammaan qaybaha adduunka waxaa loogu yeeray inay codsadaan deeqdan waxbarasho oo ay ku jiraan ardayda reer Nigeria.
Deeqaha waxbarasho ayaa loogu talagalay shahaadada koowaad, shahaadada koowaad, iyo ardayda qalin-jabisa, waxay marayaan shuruudaha ka hor intaadan dalban. Kahor intaadan dalban waa inaad ku qorneyd barnaamij waqti-buuxa ah oo ka socda Jaamacadda Tsinghua.
Jaamacadda Jiaxing waxay bixisaa a deeqo waxbarasho oo kala duwan ardayda aan Shiinaha ahayn sidaa darteed ardayda reer Nigeria way dalban karaan deeqdan waxbarasho.
Deeqaha waxbarasho ee caalamiga ah waxaa lagu bartilmaameedsanayaa ardayda tacliinta sare leh ee soo galaya Jaamacadda Jiaxing si ay u sii wadaan barnaamijka shahaadada bachelorka.
Deeqaha waxbarasho way ka duwan yihiin sidaas awgeed waxay la yimaadaan shuruudo iyo qiime kala duwan, iskuday inaad hubiso ka hor intaadan dalban.
Jaamacadda Peking ayaa bixisa deeqaha waxbarasho ee ardayda caalamiga ah ee heer sare ah Kuwa ku sii wata shahaadooyinka jaamacadda, waxaa loo baahan yahay in codsadayaashu aysan ahayn Shiineys sidaas darteed reer Nigeria waxay u qalmaan inay codsadaan.
Si aad sidoo kale xaq ugu yeelatid, musharraxa waa inuu dalbadaa oo horeyba loogu ogolaaday shahaadada koowaad, ama barnaamijka shahaadada qalin-jabinta ee PKU.
Deeqdani waxay daboolaysaa dhammaan barnaamijyada shahaadada - shahaadada koowaad, mastarka, shahaadada koowaad, iyo dhaqtarka - sidoo kale waxaa si buuxda loo maalgeliyaa khidmadaha waxbarashada, kharashyada nolosha, hoyga, iyo caymiska caafimaadka oo buuxa.
Jaamacadda Zhejiang waxay deeq waxbarasho siisaa ardayda caalamiga ah doonaya inay ku sii wataan barnaamijka shahaadada jaamacadeed ee jaamacadda.
Deeqaha waxbarasho waxaa lagu bixiyaa iyada oo ku saleysan tartanka ardayga, diiwaanka tacliinta, iyo heerarka kale ee hore.
Waa deeq waxbarasho oo buuxda oo daboolaysa khidmadaha waxbarashada, hoy bilaash ah, gunno bille ah, iyo caymis caafimaad oo dhameystiran.
Kuwani waa deeqaha waxbarasho ee loogu talagalay ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan dibadda, waa inaad hubisaa shuruudaha deeqaha ee mid kasta oo ka mid ah deeqaha waxbarasho ka hor intaadan bilaabin codsigaaga.
Si ay kuugu sahlanaato adiga, xiriiriyeyaasha mid kasta oo ka mid ah deeqaha waxbarasho ayaa la bixiyaa halkaas oo aad ka heli karto macluumaad aad u muhiim ah.
Deeqaha Deeqda MTN ee ardayda Nigerian
Jaamacadaha Bilaashka ah ee Waxbarashada ee Mareykanka
Jaamacadaha ugu raqiisan Kanada ee Ardayda Caalamiga ah
Barnaamijyada Shahaadada Masters-ka ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee shahaadooyinka wata
deeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda reer Nigeria inay wax ku bartaan dibadda
Previous Post:7 Akadeemiyadeed ee Kubadda Cagta ee ugu sarreeya England
Post Next:9 Jaamacadaha Cilmi-baarista Sare ee Kanada oo leh Faahfaahintooda oo Buuxda
Pingback: 15ka Dugsi Hoose Dhexe ee ugu Fiican Lagos Nigeria 2021
Abiodun lamidi wuxuu leeyahay,
January 23, 2021 at 10: 21 pm
Fadlan ii soo sheeg deeqda waxbarasho
February 2, 2021 at 7: 25 pm
Sifiican ugu shaqee inaad iska qorto ogeysiisyada riixista.